Yuusuf Garaad, muxuu ka yiri muddo kordhinta? | KEYDMEDIA ONLINE
Yuusuf Garaad, muxuu ka yiri muddo kordhinta?
Tifaftirihii hore ee laanta afka Soomaaliga Yuusuf Garaad Cumar, ayaa layaab ku tilmaamay damaca muddo kordhinta ee Madaxda xilka ka dhamaaday, wuxuuna sheegay aan muran la galin muddada la isla oggol yahay ee xil heynta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar, ayaa ka mid noqday madaxda ku fadhisa xilalka uu Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday u magaacabay ee ka hor yimid muddo kordhinta uu Golaha Shacabka u sameeyay hay’adaha sharci dajinta iyo Fulinta.
Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan Geeska Afrika, Badda Cas & Gacanka Cadmeed, Yuusuf Garaad, ayaa sheegay in muddada xil heynta ee heshiiska lagu yahay aan lagu xad gudbin, hayeeshee laga doodo qaabka doorasho u dhici karto.
“Xildhibaan kastaa marka uu u tartamayay, wuu ogaa muddada xaddidan ee kursiga. Waxaa kale oo uu ogaa Goorta ay khasab ku noqoneyso in uu tartan hor leh u galo isla kursiga. Qaabka iyo goobta waa laga doodi karaa laakiin goorta ma ahan in muran la geliyo”.Ayuu yiri Yuusuf Garaad.
Cabdisalaan Salwe, oo ka mid ahaa Mushrixiintii u tartamay xilka Madaxweyne ku xigeynka Maamulka Puntland doorashadii u danbeysay ayaa sheegay wadada ay qaadeen shaqsiyaadka Yuusuf ka mid yahay ay bogaadin mudan tahay oo nidaamka aad ka tirsan tahay aad la shaqeyn kartid adiga oo aan dullinimo qaadan.
“Calaamad muujinaysa in aad systemka wada shaqayn kartaan adiga oo aan is dulleeyn iskana dhigin buriska lagu burburiyo darbiyada sharciga. Baro dalkaaga oo aad u adeegto maaha hadiyad lagu siiyay iyo abaal laguu galay midna.” Ayuu yiri Salwe.